खुल्यो अर्को रहस्य ! सु`शान्तको मृ`त्यु पहिल्यै विकि`पिडियाले दिएको थियो अपडेट ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Bollywood News & Updates/खुल्यो अर्को रहस्य ! सु`शान्तको मृ`त्यु पहिल्यै विकि`पिडियाले दिएको थियो अपडेट !
सुशान्त सिंह राजपुत आत्मह’त्या के’सले नयाँ मोड लिएको छ। उनको मृ’त्युको समयमाथि कैयौं प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । सुशान्तको मृ’त्युभन्दा पहिले नै विकि`पिडियामा उनको मृ’त्युको खबर अपडेट भैसकेको थियो ।
यसै कुरालाई लिएर सुशान्तका फ्यानहरूले गृह मन्त्री अमित शाहसँग मद्द`तको माग गरेका छन्। सुशान्तको आत्मह’त्या मामिलामा मुम्बई पुलिसले जाँच पड्ताल गरिरहेको छ। यसै बीच सबै लाई हैरान बनाइदिने जानकारी इन्टर`नेटमा भाइरल भैरहेको छ। जुन सुशान्तको मृ’त्युको समयसँ ग जोडिएको छ। विकिपिडियामा सुशान्तको मृ’त्यु पहिले नै उनको मृ’त्यु कसरी अपडेट भयो?
बलिउड अभिनेता सुशान्तले आत्मह’त्या गर्नु पहिले नै उनको विकिपि`डिया पेजमा (0८:५९) बजे उनले आत्मह’त्या गरेको जानकारी अपडेट भएको थियो । आखिर यस्तो भयो कसरी भयो त ?
रिपोर्ट अनुसार, मुम्बई पुलिसले दिएको बयानमा पञ्च`नामा र पोस्टमार्टम रिपोर्टमा सुशान्त लगभग (०९:३०) बजे कोठा बाहिर आएर जुस पिइ करिब १० बजे पुनः कोठामा गएको उल्लेख छ। सुशान्तको मृ’त्युको खबर १४ जुन दिउँसो १ देखि २ बजेका बीचमा आएको थियो। यस्तोमा विकिपि`डियामा कसरी सुशान्तको मृ’त्युको खबर पहिले नै अपडेट भयो भन्ने सवाल उठेको छ ।
न्युज १८ नामक भारतीय सञ्चारमा छापिएको रिपोर्ट मुताविक, विकि`पिडियाले युटिसी टाइमलाइन लाई पछ्याउने जानकारी साइबर सेल मार्फत् पुलिसलाई प्राप्त भएको छ। यो अन्तर्रा`ष्ट्रिय स्तरिकृत टाइमलाइन भन्दा करिब साढे पाँच घन्टा पछाडि छ।
यस सत्यलाई छान`बिन गर्दा विकि`पिडियामा भएको अपडेट माथि कुनै किसिमको खेलाँची नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर यस जानकारी आउनुभन्दा पहिले नै सोसल मिडियामा प्रश्नहरूको ओइरो लाग्न थाल्यो। सुशान्तका फ्यानहरूले गृहमन्त्री अमित शाहसँग यस विषयमा गम्भीर छान`बिनको माग गरेका छन्।